CISCO Ebook collections - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
CISCO Ebook collections
21-03-2008, 06:10 PM
by Wei Luo, Carlos Pignataro, Anthony YH Chan, Dmitry Bokotey
Last edited by tu tu; 19-11-2009 at 08:13 AM.. Reason: လင့်ခ်ပြင်ရန်
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ ကိုဇော် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သန့်ဇင်ဌေး, ကော်ဖီ, ကျော်ထက်ချိန်, chit moe oo, lazyguylay, Lwin Thu, minthumon, nyowin, tartarlay18, thinn.htun3284, thureinsoe, yawnathan, zo
22-03-2008, 03:20 AM
ပြန်စာ - CISCO Ebook collections
Wireless Network Site Surveying and Installation
Last edited by tu tu; 19-11-2009 at 08:21 AM.. Reason: လင့်ခ်ပြင်ရန်
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ ကိုဇော် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သန့်ဇင်ဌေး, ကျော်ထက်ချိန်, chit moe oo, lazyguylay, Lwin Thu, minthumon, thinn.htun3284, yawnathan, zo
22-03-2008, 03:58 AM
Last edited by tu tu; 19-11-2009 at 08:28 AM.. Reason: လင့်ခ်ပြင်ရန်
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ ကိုဇော် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကျော်ထက်ချိန်, lazyguylay, Lwin Thu, minthike, minthumon, zo
22-03-2008, 04:25 AM
CCSP Cisco Secure PIX Firewall Advanced Exam Certification Guide (2nd Edition)
Last edited by tu tu; 19-11-2009 at 08:35 AM.. Reason: လင့်ခ်ပြင်ရန်
ကျော်ထက်ချိန်, lazyguylay, Lwin Thu, minthumon, thinn.htun3284, zo
21-09-2008, 03:51 PM
နှိပ်တာပဲ ဘာမှတော့ မှားစရာမရှိပါဘူး......
The file you are requesting to download is not available
Reasons for this (Invalid link, Violation of Terms or no activity of downloads for 30 days)
နောက်ကျမှ ၀င်ပြီး ဒေါင်းလုပ် လုပ်လို့လားမသိဘူး.......
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ may phyu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
21-09-2008, 08:11 PM
lazyguylay, Lwin Thu, minthumon, thureinsoe, zo
22-09-2008, 12:38 AM
ပိုစ့် (၄) ကလင့်ခ်လေးတွေကို ပြန်ကြည့်ပေးပါအုံးဗျာ.....
ဒေါင်းလုပ် ဆွဲလို့ မရလို့ပါ ။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ kyawmin အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပြန်စစ်ပြီးပါပြီ။ ဒေါင်းလို့ရပါတယ်။ ပြန်ဒေါင်းကြည့်ပါဦး။
22-09-2008, 04:29 PM
ကျွန်တော်က DL ကို parallel ဆွဲနေလို့မရတာနေမှာ.....ရတာတွေကျတော့ ရတယ်
....အခု ဒီပိုစ့်(၄)ကျမှ parallel DL လုပ်လို့မရတော့တာ...
23-10-2008, 09:31 PM
Welcome To Cisco World
ကျွန် တော် cisco World ကိုစတင် ဓွေးဖွားလိုက်ပါတယ်။
အားလုံး Cisco World ကို နှစ်သက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာ Cisco Ebook တွေကို Share link တွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အချိန်မရ၍ အစီအစဉ် တကျမဖြစ်မှုကို ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါတယ်။
Advanced router configuration.pdf
basic configuration router.pdf
Sybex CCNA_640-802 6th Ed_1_. Todd Lammle.pdf
အဆင်ပြေတာလေး တွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ koarkarhtut အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဒဿဂီရိ, အင်ဖိုခ၇က်ကာ, ကျော်ထက်ချိန်, မောင်ပေါ်ဦး, lazyguylay, linyone, Lwin Thu, minthumon, thura.it, thureinsoe, zo
24-10-2008, 03:12 PM
ခင်ဗျာ ရဲ့ Cisco EBook Collection မှာ CCIE Exam ကို တွေ့ လိုက် ရလို့ အင်မတန်မှ ဂုဏ်ယူ မိပါတယ်။ ကျွန် တော် တောင် CCNP အတွက် အဆင်သင့် မဖြစ်သေးပါဘူး ။ ခင်ဗျား က CCIE Exam တင်ထားတော့ Cisco မှာ တော်တော် ခရီးရောက်နေပြီလို့ထင်ပါတယ်။ Cisco နဲ့ ပတ်သက်တာ တွေ မေးခွင့်ရှိမရှိသိချင်ပါသည်။
koarkarhtut (CCNA CISCO11500160)
lazyguylay, Lwin Thu, zo
I would like to sit ccna exam .
I want to pass CCNA exam .Do you have any latest questions ?Help me please because if i can not pass i cannot not my money brother.Do you have any link ?Because i asked my friend but he never tell me where he got it.satikhov and4shared is i can't find it now.Please help me .
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ htoo htoo အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
lazyguylay, thura.it, zo
htoo htoo ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by htoo htoo
ပို့စ်9ခုအတွက် 22 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
cisco နဲ့ ပတ်သတ်သော သူငယ်ချင်းများ ကျွန်တော့်ဆီမှာ packet tracer version5ရှိတယ်ဗျ၊ အသုံးကျမယ်ဆိုရင် တင်ပေးမယ်လေ။
အနီးဆုံးက အစပြုလို့ စိတ်တွေ တူညီလိုက်စမ်းပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ကော်ဖီ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ကော်ဖီ
ထူးထူး ရေ CCNA Exam အတွက် www.4shared.com မှ press4sure version 3.20 ကို Downlaod ဆွဲချလိုက်ပါ။ အခုအထိ မှန်နေပါသေးတယ်။
minthike, thura.it, zo
hello KO Htu Htu
i have tried to download ur ebooks but no one cannot be downloaded.This message " file not found" are given whenever i try to download every link. I amabeginner learning cisco config especially router.
if u can, help me and please share me.
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ thetwinoo အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by thetwinoo
19-11-2009, 08:38 AM
ဘယ်စာအုပ်ကို လိုချင်တာလဲတော့ မသိဘူး။
ပို့စ်နံပါတ်(၁) (၂) (၃) (၄) က လင့်ခ်တွေတော့ ပြင်ပေးပြီးပါပြီ။
လုလု, minthike, minthumon, zo
21-04-2010, 01:40 AM
ပြန်စာ - Welcome To Cisco World
အကိုရေ Link သေနေပါပြီ.. အစဉ်ပြေရင် ပြန်တင် ပေးစေချင်ပါတယ် ..... ကျေးဇူးပါ..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ရန်မျိုးအောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Originally Posted by koarkarhtut View Post
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ မက္ခရာ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by မက္ခရာ
အပေါ်မှာ တင်ပေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေနဲ့ တူမတူတော့ ကျွန်တော် တစ်အုပ်ချင်း တိုက်မစစ်ပေးလိုက်နိုင်တာ တောင်းပန်ပါတယ် - စာအုပ်တွေက တော်တော်များနေလို့ပါ။ အရေးတကြီး လိုနေမယ့် ဒါမှမဟုတ် လေ့လာချင်တဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ အတွက် လေ့လာလို့ လွယ်အောင် ကျွန်တော့်မှာ စုထားသမျှ စာအုပ်တွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်အုပ်ချင်း ခွဲတင်မပေးနိုင်တာကိုတော့ နားလည်ပေးပါ - ကျွန်တော့်လည်း တစ်ခြား အလုပ်လေးတွေ ရှိသေးလို့ပါ။ တကယ်လို့ အောက်ဖော်ပြပါ စာအုပ်အားလုံးကို Download ချမှ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ စာအုပ်လေး ၄ - ၅ အုပ်လောက်ပဲ ရမှာ မျိုး ဖြစ်နေရင်တော့ ကျွန်တော့် MF mail levendreams@myanmarfamily.org ကို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေရဲ့ နာမည်ရွေးထုတ်ပြီး အကူအညီတောင်းခံနိုင်ပါတယ်။ ( အမှန်တကယ် လိုအပ်သူများအတွက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ )
Update !! ကျေးဇူးပြုပြီး Mail ကိုသာ ဆက်သွယ်ပါ - ဒီနေရာမှာ Reply မလုပ်ပါနဲ့ - Reply တွေ အရမ်း ဖောင်းပွကုန်ပါလိမ့်မယ်။
Download ပြီးဆုံးရင် ရရှိမယ့် စာအုပ်စာရင်းကတော့ အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်းပါ။ ဒါ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုက တစ်အုပ်တည်း မဟုတ်ပါဘူး သူ့အောက်မှာ တစ်ချို့ folder တွေက အထဲမှာတင် စာအုပ် ၄ - ၅ အုပ်ခွဲထားတာတွေ ပါပါသေးတယ်။
A Security Blueprint for Enterprise Networks\_
Administering Cisco QoS\_
Administering Cisco QOS for IP Networks\_
Advanced Ip Services for Cisco Networks\_
Building Cisco Remote Access Networks\_
Cisco - CCNA Exam 640-607 Certification Guide\_
Cisco - cse official student guide\_
Cisco - Vulnerabilities-The Past,The Present and The Future (2003 )\_
Cisco Internetworking Design Guide\_
Cisco Internetworking Technology Overview\_
CISCO Internetworking Technology Overview (RUS)\_
Cisco IOS Desktop Switching Software Configuration Guide\_
Cisco IOS Reference Guide\_
Cisco IOS(TM) Software Quality of Service Solutions\_
Cisco network essentials\_
Cisco network photos\_
Cisco Packetized Voice And Data Integration (PDF book)\_
CISCO Press - Cisco AS5x00 Case Study for Basic IP Modem Services\_
Cisco press - Data Center Design and Implementation\_
CISCO Press - Designing ATM MPLS Networks\_
Cisco Press - Internetwork Troubleshooting Guide\_
Cisco Press - Internetworking Case Studies\_
Cisco Press - Internetworking Terms and Acronyms\_
Cisco Press - Introduction to Cisco Router Configuration\_
Cisco Press - Intrusion Detection Planning Guide\_
Cisco Press - Overview of Access VPNs and Tunneling Technologies\_
Cisco Press - PIX device Management\_
Cisco Press - SNA FrameRelay\_
Cisco Press - Token Ring Switching\_
Cisco Press - Troubleshooting Internetworking Systems\_
Cisco Press - WAN QUICK START SELF-PACED COURSE PREPARATION GUIDE\_
Cisco Press ICND\_
Enabling Enterprise Miltihoming with Cisco IOS Network Address Translation (NAT)\_
Internet Routing Architectures 2nd Edition\_
Osbourne Cisco Multicast Routing and Switching\_
QUE - Practical Cisco Routers\_
Routing TCPIP Vol 1\_
Routing TCPIP Vol 2\_
SYBEX CCNP CCIP BSCI STUDY GUIDE\_
SYBEX CCNP SWITCHING STUDY GUIDE\_
Syngress - BuildingaCicso Network for Windows 2000\_
Syngress - CCNP Study Guide\_
Syngress - Cisco Security Specialist_s Guide to PIX Firewall\_
Syngress Media - 70 Cisco Voice Over IP\_
Tech Info - CISCO 1700 router\_
Tech Info - CISCO 2900 switch\_
Tech Info - CISCO 3640 Gatekeeper\_
Tech Info - CISCO 7206 Router\_
Tech Info - CISCO Aironet\_
Tech Info - CISCO As5300 Gateway\_
Tech Info - CISCO PIX\_
Tech Info - CISCO Video\_
Upgrading Software for the Cisco Secure PIX Firewall\_
Wiley & Sons - Frame Relay for High Speed Networks\_
Wiley & Sons - Load Balancing Servers, Firewalls and Caches\_
Wiley & Sons - The CISSP Prep Guide\_
Wireless CWNA Exam PW0 - 100 Official Study Guide\_
password = www.myanmarfamily.org
CISCO.part1.rar (95.4 MB)
CISCO.part2.rar (95.4 MB)
CISCO.part3.rar (95.4 MB)
CISCO.part4.rar (95.4 MB)
CISCO.part5.rar (95.4 MB)
CISCO.part6.rar (70.6 MB)
Last edited by KznT; 16-07-2010 at 02:28 PM..
သန့်ဇင်ဌေး, မောင်ပေါ်ဦး, bonge, kyaukphyu, Lwin Thu, minthike, minthumon, runner.zaw, thureinsoe, tu tu, zo
ခုလက်ရှိနောက်ဆုံး Confirm ဖြစ်တဲ့ 640-802 exam စာအုပ်လေးတွေလိုချင်ပါတယ်
Last edited by မက္ခရာ; 16-07-2010 at 02:28 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ မက္ခရာ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဂတုံးလေး, Lwin Thu, zo
ဦးဇော်လင်း (Youth) ရေးတဲ့ Road to CCNA စာအုပ်လို Cisco အကြောင်း မြန်မာလို ရေဒထားတဲ့ စာအုပ်လေးတွေ ရှိရင် မျှပါဦး
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ကော်ဖီ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
thureinsoe, winaingso, zo
ကျွန်တော်လည်း CCNA 640-802 exam book လေးလိုချင်လို့ ပါ..
လောလောဆယ်တော့ စာဖတ်နေပါတယ်..software သုံရတာလည်း
သိပ်အဆင်မပြေဘူး နားမလည်တာပေါ့နော်... သင်တန်းကျတော့လည်း
မတက်နိုင်လို့ ပါ။ စာမေးပွဲ ဖြေမှာပါ။ တဖက်ကလည်း ကူညီပေးကြပါနော်
လေ့လာမယ့်စာအုပ်လေးရယ်. ဖြေရမယ့် မေးခွန်းလေးရယ်...အားလုံးကို
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ march အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စာအုပ်တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော်တင်ပေးထားတာ ဒီနေရာမှာ ရှိပါတယ်။ တစ်ခြားလူတွေ တင်ပေးထားတာလည်း ဒီနေရာမှာ အများကြီးပါ။ Links တွေ သေနေတာတော့ ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ လိုချင်တဲ့ စာအုပ်တွေ လင့်သေနေရင် နာမည်တွေ မှတ်ပြီး တောင်းခဲ့နိုင်ပါတယ်။ တတ်နိုင်သမျှ စုံအောင် ပြန်တင်ပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပေးပါ့မယ်။
နောက်ပြီး ကျွန်တော် ဟိုတစ်လောက ဒေါင်းလုပ်ချထားတဲ့ CCNA_640-802 ရှင်းလင်းချက် ဗွီဒီယို ဖိုင်တွေ စီဒီ တစ်ချပ်စာ - 670MB လောက် ရှိပါတယ်။ ဘယ်လို ဗွီဒီယိုဖိုင်တွေ ပါမယ်ဆိုတာ အောက်မှာ ပုံနဲ့ နမူနာ ပြထားပါတယ်။ စုစုပေါင်း 63 ဖိုင်ပါ။
01 - Welcome to Cisco CCENT.wmv
02 - Foundations - What isaNetwork.wmv
03 - Foundations - Living in the OSI World.wmv
04 - Basic TCPIP - Addressing Fundamentals.wmv
05 - Basic TCPIP - TCP and UDP Communication.wmv
06 - Basic TCPIP - Understanding Port Numbers.wmv
07 - Basic TCPIP - The Tale of Two Packets.wmv
08 - LANs - Welcome to Ethernet.wmv
09 - LANs - Understanding the Physical Connections.wmv
10 - LANs - Understanding LAN Switches.wmv
11 - LANs - Working with the Cisco Switch IOS.wmv
12 - LANs - Initial Setup ofaCisco Switch.wmv
13 - LANs - Configuring Switch Security 1.wmv
14 - LANs - Configuring Switch Security 2.wmv
15 - LANs - Optimizing and Troubleshooting Switches.wmv
16 - Wireless - Understanding Wireless Networking.wmv
17 - Wireless - Wireless Security and Implementation.wmv
18 - Advanced TCPIP - Working with Binary.wmv
19 - Advanced TCPIP IP Subnetting 1.wmv
20 - Advanced TCPIP IP Subnetting 2.wmv
21 - Advanced TCPIP IP Subnetting 3.wmv
22 - Routing - Initial Router Configuration.wmv
23 - Routing - SDM and DHCP Server Configuration 1.wmv
24 - Routing - SDM and DHCP Server Configuration 2.wmv
25 - Routing - Implementing Static Routing.wmv
26 - Routing - Implementing Dynamic Routing with RIP.wmv
27 - Routing - Internet Access with NAT and PAT.wmv
28 - Routing - WAN Connectivity.wmv
29 - Management and Security - Telnet, SSH, and CDP.wmv
30 - Management and Security - File Management.wmv
31 - Last Words for Test Takers.wmv
32 - Advanced TCPIP - IP Subnetting 1.wmv
33 - Advanced TCPIP - IP Subnetting 2.wmv
34 - Advanced TCPIP - IP Subnetting 3.wmv
35 - Advanced TCPIP - Working with Binary.wmv
36 - Review - Rebuilding the Small Office Network 1.wmv
37 - Review - Rebuilding the Small Office Network 2.wmv
38 - Review - Rebuilding the Small Office Network 3.wmv
39 - Switch VLANs - Understanding VLANs.wmv
40 -  Switch VLANs - Understanding Trunks and VTP.wmv
41 - Switch VLANs - Configuring VLANs and VTP 1.wmv
42 - Switch VLANs - Configuring VLANs and VTP 2.wmv
43 - Switch STP - Understanding the Spanning-Tree Protocol.wmv
44 - Switch STP - Configuring Basic STP.wmv
45 - Switch STP - Enhancements to STP.wmv
46 - General Switching - Troubleshooting and Security Best Practices.wmv
47 - Subnetting - Understanding VLSM.wmv
48 - Routing Protocols - Distance Vector vs. Link State.wmv
49 - Routing Protocols - OSPF Concepts.wmv
50 - Routing Protocols - OSPF Configuration and Troubleshooting.wmv
51 - Routing Protocols - EIGRP Concepts and Configuration.wmv
52 - Access-Lists - The Rules of the ACL.wmv
53 - Access-Lists - Configuring ACLs.wmv
54 - Access-Lists - Configuring ACLs 2.wmv
55 - NAT - Understanding the Three Styles of NAT.wmv
56 - NAT - Command-line NAT Configuration.wmv
57 - WAN Connections - Concepts of VPN Technology.wmv
58 - WAN Connections - Implementing PPP Authentication.wmv
59 - WAN Connections - Understanding Frame Relay.wmv
60 - WAN Connections - Configuring Frame Relay.wmv
61 - IPv6 - Understanding Basic Concepts and Addressing.wmv
62 - IPv6 - Configuring, Routing, and Interoperating.wmv
63 - Some Last Words for Test Takers.wmv
CCNA_640-802.zip.001 (95.4 MB)
CCNA_640-802.zip.002 (95.4 MB)
CCNA_640-802.zip.003 (95.4 MB)
CCNA_640-802.zip.004 (95.4 MB)
CCNA_640-802.zip.005 (95.4 MB)
CCNA_640-802.zip.006 (95.4 MB)
CCNA_640-802.zip.007 (48.5 MB)
တစ်ခြားလိုအပ်မယ့် မေးခွန်းတွေ စာအုပ်တွေကို http://library.nu/ မှာ Account လုပ်ပြီး Search query ကို CCNA လို့ ရိုက်ရှာလိုက်ပါ။ ဒါဆို CCNA နဲ့ ပတ်သတ်မယ့် ကိုယ်လေ့လာသင့်တဲ့ စာအုပ်တွေ တစ်ပုံတစ်ပင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Download ချဖို့ကလည်း ifile နဲ့ Megaupload links တွေများလို့ မြန်မာနိုင်ငံက ဆိုရင်တောင် အဆင်ပြေကောင်း ပြေမှာပါ။ ရှာလို့တွေ့ပေမယ့် ဒေါင်းလုပ်ချဖို့ အဆင်မပြေဖြစ်နေခဲ့ရင် လိုချင်တဲ့ စာအုပ်တွေရဲ့ links တွေကို စုထားပြီး ဒီနေရာမှာဖော်ပြပေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ အဆင်ပြေအောင် ကြိုးစားပေးပါမယ်။
Last edited by KznT; 02-06-2011 at 11:40 PM..
bagothar85, Lwin Thu, minthike, minthumon, thura.it, tu tu, zo
ကို Kznt ခင်ဗျ
video file တွေကို ifile တင်ပေးလို့ရနိုင်မလားခင်ဗျ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ Lwin Thu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကျွန်တော် ifile ကနေ တင်မပေးဖြစ်တာ တင်ပေးတုန်း ခဏလောက်ပဲ ရှိပြီး နောက်ပိုင်း ဒေါင်းလုပ်ချတဲ့သူ မရှိတဲ့ အခါကျရင် Links တွေက ခဏချင်း အဖျက်ခံရလို့ပါ။ အဲ့ကျတော့ ပေးထားတဲ့ Links တွေက အလုပ်မလုပ်တော့ရင် ဝင်ကြည့်တဲ့သူလည်း စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတယ်။ တင်ပေးရတာက ကျွန်တော့်အတွက် အပန်းမကြီးပါဘူး။ တင်ပေးပြီး အားလုံးအဆင်ပြေတယ် - ခဏခဏ Links ပျက်လို့ပါလို့ အအော်မခံရရင် ကျွန်တော် တင်ပေးရကျိုးနပ်ပါတယ်။ အဲ့တာတွေကြောင့် ifile ကို သိပ်မသုံးတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ Links ကနေ ဒေါင်းလုပ်ချဖို့ အဆင်မပြေရင် ကိုLwin Thu လေ့လာနိုင်အောင် ifile ကို ပြောင်းတင်ပေးထားပါတယ်။
CCNA_640-802.part1.rar 95.367 MB
CCNA_640-802.part2.rar 95.367 MB
CCNA_640-802.part3.rar 95.367 MB
CCNA_640-802.part4.rar 95.367 MB
CCNA_640-802.part5.rar 90.243 MB
Last edited by KznT; 12-06-2011 at 08:21 AM..
ရန်မျိုးအောင်, ကောင်းကင်ထက်, မောင်ပေါ်ဦး, bagothar85, Lwin Thu, minthike, minthumon, zo
13-06-2011, 06:13 AM
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ကို Kznt
ကျွန်တော် file အကုန်လုံးဒေါင်းပြီးသွားပါပြီ
ခဏခဏ Links ပျက်လို့ပါတယ်လို့ လည်းဘယ်တော့မှ မအော်ပါဘူးခင်ဗျ
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ Lwin Thu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
CCNA နဲ့ ပတ်သက်ပြီး.. အခု စတင် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်. Exam လဲ ဖြေဖို့ Plan ချထားပါတယ် အကိုတို့.. အခုလက်ရှိ ကျွန်တော် လေနေတာက ဘယ်က ဘယ်လိုစပြီးလေ့လာရမှာလဲ.. ပြီးတော့ ဘာတွေ လုပ်သင့်လဲ .. NE နဲ့ပါတ်သတ်တာတွေတော့.. ပြည့်စုံသင့်သလောက် ပြည့်စုံနေပါပြီ.. အခု CCNA ကို ဘယ်လို စတင်ရမလဲ ဆိုတာပါ.. ကျေးဇူးပြု ပြီး လမ်းညွန်ပေးပါဦးဗျာ..
20-02-2012, 08:59 AM
ကျွန်တော်အခုတစ်လော စာအုပ်တွေဖတ်ဖြစ်နေလုိ့ ကောင်းတာလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်........
Password = WWW.Myamarfamily.Org
Lwin Thu, microsoft, runner.zaw, zo
23-10-2012, 10:08 AM
တင်ထားတဲ့ link တွေ သေနေလို့ ပြန်တင်ပေးပါခင်ဗျာ...
Originally Posted by မောင်ပေါ်ဦး
cisco ebooks, educational ebooks
Java ebook မှာစုဝေးရာ မောင်တေဇာဝင်း E-books များ 19 18-11-2012 12:27 PM